Vaovao mahafaly ho anao - Miomana hihaona amin Andriamanitrao- vaovao malagasy - Miomana hihaona amin Andriamanitrao
KRISTIANA VE ?
NY MARINA MANAFAKA
Fampianarana sy Fitoriana Filazantsara
Faly manasa anao hanatrika ny: FAMPIANARANA SY FITORIANA FILAZANTSARA « Katsaho ny zavatra any ambony, any amin’izay itoeran’i Kristy, saino ny zavatra any ambony fa tsy ny ety an-tany » Kolosiana 3: 1-2 Atao ny Alahady 12 Desambra 2021 – Ao amin’ny PK 00 Soarano Manomboka amin’ny 09 maraina sy amin’ny 02 ora tolakandro Mpitoriteny: Pst Tantely RATSIMBA […]
NY TONTOLON’NY MOZIKA
Ho antsika TANORA Manasa anao ho avy ny Asabotsy 27 Novambra 2021 izao amin’ny 2ora Tolakandro. Toerana: Villa Manome ny Soa Ambohibao (làlana mankany amin’ny Bianco) Inona ary ny Sitrapon’Andriamanitra? Avy aiza ny loharano nipoiran’ireo mozika isankarazany henoitsika ankehitriny? Inona avy no mety fiantraikan’ny mozika amin’ny fitondrantenantsika tanora? Ahoana ny ahafantarana ny aingampanahy avy amin’i Jesosy sy […]
Omano dieny izao ny fotoananao
12 DESAMBRA 2021 Ao amin’ny GARE Soarano – PK 0 Manomboka amin’ny 09 ora maraina sy amin’ny 04 ora tolakandro. Omano ihany koa ny fianakaviana sy ny namana ary ireo manodidina rehetra. Araho tsy tapaka ny site. Ho hitanao eto tsy ho ela ny andinindininy rehetra.
Fandaharana Miomana amin’ny MaTv
Fandaharana Miomana arahinao isaky ny alahady maraina amin’ny 8ora 15 mn sy ny alarobia amin’ny 11ora atoandro amin’ny fahitalavitra MaTv. « Miomàna hihaona amin’Andriamanitra » Amosa 4: 12
Biby madio sy biby maloto hoe?
“Koa aza avela hisy hitsara anareo ny amin’ny fihinana, na ny fisotro, na ny andro firavoravoana, na ny voaloham-bolana, na ny Sabata” Kolosiana 2:16 -17 Voalohany tokony fantatsika amin’ny izao andro ankehitriny izao fa ny famonjena dia avy amin’ny finoana an’i Jesosy Kristy irery ihany fa tsy avy amin’ny lalàna velively. Maro ny andinin-tSoratra Masina […]
Faly manasa anao hanatrika ny:
« Katsaho ny zavatra any ambony, any amin’izay itoeran’i Kristy, saino ny zavatra any ambony fa tsy ny ety an-tany »
Kolosiana 3: 1-2
Atao ny Alahady 12 Desambra 2021 – Ao amin’ny PK 00 Soarano
Manomboka amin’ny 09 maraina sy amin’ny 02 ora tolakandro
Mpitoriteny: Pst Tantely RATSIMBA
« Ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevo » Jaona 8:32
TSY MISY RAKITRA – TSY MISY FANENTANANA ARA-BOLA
Ho antsika TANORA
Manasa anao ho avy ny Asabotsy 27 Novambra 2021 izao amin’ny 2ora Tolakandro.
Toerana: Villa Manome ny Soa Ambohibao (làlana mankany amin’ny Bianco)
Inona ary ny Sitrapon’Andriamanitra?
Avy aiza ny loharano nipoiran’ireo mozika isankarazany henoitsika ankehitriny?
Inona avy no mety fiantraikan’ny mozika amin’ny fitondrantenantsika tanora?
Ahoana ny ahafantarana ny aingampanahy avy amin’i Jesosy sy ny tsy avy Aminy?
12 DESAMBRA 2021
Ao amin’ny GARE Soarano – PK 0
Manomboka amin’ny 09 ora maraina sy amin’ny 04 ora tolakandro.
Omano ihany koa ny fianakaviana sy ny namana ary ireo manodidina rehetra.
Araho tsy tapaka ny site. Ho hitanao eto tsy ho ela ny andinindininy rehetra.
Fandaharana Miomana arahinao isaky ny alahady maraina amin’ny 8ora 15 mn sy ny alarobia amin’ny 11ora atoandro amin’ny fahitalavitra MaTv.
« Miomàna hihaona amin’Andriamanitra » Amosa 4: 12
“Koa aza avela hisy hitsara anareo ny amin’ny fihinana, na ny fisotro, na ny andro firavoravoana, na ny voaloham-bolana, na ny Sabata” Kolosiana 2:16 -17
Voalohany tokony fantatsika amin’ny izao andro ankehitriny izao fa ny famonjena dia avy amin’ny finoana an’i Jesosy Kristy irery ihany fa tsy avy amin’ny lalàna velively. Maro ny andinin-tSoratra Masina milaza an’izany ao amin’ny Baiboly.
“Fa tsy lalàna, fa fahamarinana amin’ny finoana, no nahazoan’i Abrahama sy ny taranany ny teny fikasana ho mpandova izao tontolo izao izy. » Romana 4:13
« Koa amin’izany dia ataontsika fa finoana no anamarinana ny olona, fa tsy ny asan’ny lalàna. » Romana 3:28 Read more »
Maimaimpoana ny Famonjena
Efesiana 1 : 3-7 3 Isaorana anie Andriamanitra, Rain’ i Jesosy Kristy Tompontsika, Izay nitahy antsika tao amin’ i Kristy amin’ ny fitahiam-panahy rehetra any an-danitra,4 araka ny nifidianany antsika tao aminy, fony tsy mbola ary ny fanorenan’ izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika,5 rehefa notendreny rahateo amin’ ny fitiavana isika mba ho Azy [Na: amin’ ny fitiavana, rehefa notendreny rahateo ho Azy isika] amin’ ny fananganan-anaka amin’ ny alalan’ i Jesosy Kristy, araka izay ankasitrahan’ ny fony,6 ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany, izay nanasoavany antsika maimaimpoana ao amin’ ny Malala.7 Izy no ananantsika fanavotana amin’ ny ràny, dia ny famelana ny fahadisoantsika, araka ny haren’ ny fahasoavany
Ampy ho anao ny fahasoavako (2 Kor 12 :9)
Fampaherezana manoloana ny ady sy ny fitsapàna, fizahan-toetra izay TSY MAINTSY lalovana. Aza gaga raha iharan’ny fizahan-toetra mahamay raha tsy maintsy hisy izany: 1Petera 4/12 : « Ry malala, aza gaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapan-toetra, ary aza atao ho zavatra mahagaga manjo anareo izany ». 1Petera 1 :6 : « Izany no iravoravoanareo, na dia ampalahelovina vetivety ankehitriny amin’ ny fakam-panahy maro samy hafa aza hianareo, raha tsy maintsy hisy izany » .Isaia 55 :8-9 : « Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo, Ary ny làlanareo kosa tsy mba làlako, hoy Jehovah.9 Fa tahaka ny hahavon’ ny lanitra noho ny tany no hahavon’ ny làlako noho ny làlanareo sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo». Tsy hoe milamina foana rehefa ao amin’ny Tompo. Misy fanefena, fanamboarana, famolavolana mba hitovy amin’i Jesosy isika, mba hitovy endrika Aminy (Rom 8/29), mba ho voaforona ao aminareo Kristy (Gal 4/12), mba ho lehilahy lehibe, mahatratra ny ohatry ny halehiben’ ny fahafenoan’ i Kristy (Efe 4/13). Read more »
Tsindrio eo amin'ny sary
Ny Fahatsorana ao amin’i Jesosy
Ny fiovana entin’ny fanoloran-tena marina
Namoaka ahy tao anatin' ny fan..
Miomàna 298 : Aoka izy hitand..
Miomàna 297 : Katsaho sy sain..
Invité du jour Real TV ce 04 ..
Spot fitoriana PK 00 12 décem..
Fitoriana 12 déc 2021 PK 00 A..
Aza mety hohazonin'ny zioga fa..
Miomàna 296 : Ny fahendrena (..
Ny fahafahana (lasy Mantasoa 1..
Miomàna 295 :Ny fahendrena 14..
Minoa an'i Jesosy Tompo 03 10 ..
Mpitsidika izao: 4
Copyright © Vaovao mahafaly ho anao – Miomana hihaona amin Andriamanitrao- vaovao malagasy - Miomana hihaona amin Andriamanitrao